Uphengululo lweNcwadi engeyiyo
Isepha naManzi, nguMarta D. Riezu
Ubuchwephesha ekufuneni ukugqwesa kwifashoni. Elo nqanaba lobuhle elifuna ukuphakamisa uhlobo oluthile lwesibingelelo endaweni yokugqama, linokubangela isiphumo esichaseneyo. Kusenokwenzeka ukuba ngenye imini aphume aye esitratweni eze njengalaa kumkani wasebalini, ecinga ukuba uyahamba...
Prometheus, nguLuis García Montero
UYesu Krestu wazoyisa ezona zilingo zikaSathana zokusindisa uluntu. UPrometheus wenza okufanayo, ecinga nesohlwayo esasiza kuza kamva. Ukulahlwa kwenza intsomi kunye nentsomi. Ithemba esinokuthi silifumane ngenene ngaxa lithile ngolu hlobo lobugorha salifunda amaxesha amaninzi kwaye...
Helgoland nguCarlo Rovelli
Umceli mngeni wenzululwazi ayikokufumana kuphela okanye ukuphakamisa izisombululo zayo yonke into. Umcimbi ukwamalunga nokunikezela ngolwazi kwihlabathi. Ukudivuna kuyimfuneko njengoko kuntsonkothile xa iingxoxo zingeniswa kubunzulu boqeqesho ngalunye. Kodwa njengoko satshoyo isilumko, singabantu yaye akukho nto...
Ukufa okuxelwe yi-sapiens kwi-Neanderthal
Yayingeyiyo yonke into eyayiza kuba yiloo nto ingaqhelekanga ebomini. Ngenxa yokuba kummiselo olawula yonke into, eso siseko esibonisa ubukho bezinto kuphela ngokusekelwe kwixabiso labo elichaseneyo, ubomi nokufa zenza isakhelo esibalulekileyo phakathi kwezinto ezigqithisayo ezihambayo. Kwaye isizathu...
Uhlobo lokubaleka ngu-Anthony Brandt
Siphengulula imfihlo enkulu yokuzivelela komntu, i-prodigy eyayiyinyani eyahlukileyo. Asithethi kakhulu ngobukrelekrele kodwa sithetha ngokuyila. Ngobulumko, i-proto-man inokuqonda ukuba yintoni umlilo kwimiphumo yokusondela kuwo. Ndiyabulela kubuchule bokudala...
Ukusuka Ngaphakathi, nguMartin Amis
Uncwadi njengendlela yobomi ngamanye amaxesha kuqhuma kunye nomsebenzi omi emgubasini wengxelo, engapheliyo kunye ne-biographical. Kwaye oko kugqiba ngowona msebenzi unyanisekileyo wombhali oxuba inkuthazo, i-evocations, iinkumbulo, amava ... Kanye into uMartín Amis asinika yona ...
Ngaphantsi kwejongo lenamba evukileyo, nguMavi Doñate
Ukuba yintatheli kuqinisekisa onke amanqaku ekuzicingeni njengomntu ohambileyo. Kuba ukuze ubalise okwenzekayo naphi na emhlabeni kufuneka ube nolwazi olusisiseko ukuze udlulisele okwenzekayo ngokuthembeka. Isiphumo sinokuba, njengale meko, i...
Sacramento, nguAntonio Soler
Ukuba iipali zitsala umdla ngumyalelo wefiziksi. Usuka apho umama wazo zonke iicontradictions zethu. Izikhundla ezigqithisileyo emntwini ziphela ngokuzimanya naloo mvakalelo ingayekiyo yemagnethi okanye inertia. Okulungileyo nokubi kubhenca iikhathalogu zabo zemigaqo kunye nezilingo nayo yonke into ...
Uluhlu lwezinto ezilahlekileyo, uJudith Schalansky
Azikho ezinye iiparadesi kunezo zilahlekileyo, njengoko ebeya kuthetha uJohn Milton. Kwanezinto ezixabiseke ngaphezu kwezo ningasenazo, ningenako nokuzibona. Imimangaliso eyinyani yehlabathi ngoko ingaphezulu kwezo siphela siphulukene nazo okanye sizitshabalalise kunezo namhlanje eziya kuthi ziyilwe ngolo hlobo, ukongeza...
UbuGcisa beMfazwe phakathi kweeNkampani, nguDavid Brown
U-Sun Tzu wabhala incwadi yakhe ethi "Ubugcisa beMfazwe" emva kwenkulungwane ye-XNUMX BC. Amadabi amaninzi kamva, kwaye ukususela kwinkulungwane ye-XNUMX ukuza kuthi ga ngoku, ukhuphiswano olutsha lokusebenzisa ubugcisa obulungileyo okanye obubi kuyaphikiswana phakathi kwamazwe ngamazwe okanye amaqumrhu karhulumente. Emva koko siqhubela phambili kubugcisa be ...
Isibane esikhulu, nguMaria Konnikova
Umbhali ngaphambi kokuba abe ngumdlali we-poker, uMaría Konnikova weza kumdlalo wemidlalo yamakhadi evela kwimpembelelo yombalisi ngamnye ofuna ukusondela kwimeko entsha yokubalisa ukuze axhase umxholo. Songeza kumcimbi wobugqirha bakhe kwizengqondo kwaye sifumana ingxelo ephucukileyo yePelayo ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha14 Elandelayo →
Iphepha elilandelayo "